WINDOWS 10 ကိုပရင်တာကိုမမွငျပါဘူး - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကိုအတွက်ပုံနှိပ်စက်မြေပုံနှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်း
သငျသညျ Windows 10 ကိုအသုံးပြုသူများသည်စနစ်ပရင်တာကိုမမွငျပါဘူးကွောငျးတှေ့စခွေငျးငှါ၎င်း operating system ကိုများအတွက် update ကို install လုပ်ပြီးနောက်။ ဤပြဿနာကိုအမြစ်အကြောင်းမရှိစနစ်ကပျက်ကျသို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းမှဖြစ်လိမ့်မည်။
Windows 10 ကိုအတွက်ပရင်တာ၏ display ကိုအတူပြဿနာဖြေရှင်း
စတင်ရန်သေချာပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုထဲမှာမတည်ရှိသည်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ USB-cable ကို port များ၏သမာဓိစစ်ဆေးပါ။
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခြား port သို့ကြိုးထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားပါ။
cable ကိုလုံလုံခြုံခြုံပရင်တာနှင့် PC ကိုသို့ပလပ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သငျသညျပထမဦးဆုံးစက်ကို connect သောအခါ, အဲဒါကိုမှမပံ့ပိုးကြောင်းဖွယ်ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်စနစ်ဒရိုင်ဘာမလိုအပ်ပါဘူး။
Method ကို 1: ရှာရန်ပြဿနာများ
သငျသညျစနစ် utilities ကို အသုံးပြု. ပြဿနာများအတွက်ရှာဖွေမှုကို run နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအလိုအလျှောက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်။
အိုင်ကွန်ပေါ်မှာ Right-click "Start" နှင့်ကို select "Control Panel ထဲက".
ကြီးမားသောအိုင်ကွန်ဖို့အမြင် Switch များနှင့်အပိုင်းကိုရှာဖွေ "ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း".
အပိုင်း "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ" ကို select "ဟုအဆိုပါပရင်တာအသုံးပြုခြင်း".
အသစ်က window ထဲတွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
သငျသညျ inoperable device ကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ကစာရင်းထဲတွင်မကြောင်းညွှန်ပြရန်လိုအပ်မည်သည့်စာရင်းပေးထားနိုင်ပါသည်။
အများဆုံးကိစ္စများတွင် standard Troubleshooter အခြေခံပြဿနာများကိုနှင့်အချို့သောဆုံးရှုံးမှုဖြေရှင်းဖို့ကူညီပေးသည်။
Method ကို 2: ပရင်တာ Add
သငျသညျကွဲပြားခြားနားပြုပါနှင့်ပရင်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် system ကိုအလိုအလျှောက်တရားဝင် site မှ device ကိုများအတွက်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုတင်ပေးပါတယ်။
မီနူးကိုဖွင့် "Start" နှင့်ကို select "န့်သတ်ချက်များ".
ပထမဦးဆုံးအပိုင်းမှာတော့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပရင်တာသို့စကင်နာ Add".
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, စနစ် device ကိုသူ့ဟာသူရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကမလျှင်, ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "လိုအပ်သောပရင်တာ ... ".
အမှတ် "နာမတော်အားဖြင့်တစ်ဦး shared ပရင်တာကို Select လုပ်ပါ" သို့မဟုတ်သင့်လျော် option ကို။
နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ click နှိပ် "Next ကို".
ဤအထိန်းသိမ်းရေးပြီးနောက်, ပရင်တာကိုချိတ်ဆက်မပြုခဲ့ပါလျှင်, ကိုယ်တိုင်မောင်းသူကို install ကြိုးစားပါ။ ရုံထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကိုသွားပြီးသက်ဆိုင်ရာအပိုင်း၌သင်တို့၏ပရင်တာမော်ဒယ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းနေရာချထား။ သူတို့ကို Download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။
ယာဉ်မောင်းကို install ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို
standard Windows ကိရိယာတွေသုံးပြီးယာဉ်မောင်း Installing
အဲဒီ options windose 10 အတွက်ပရင်တာရဲ့ Display နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မထားဘူးဆိုရင်, သင်ကအထူးကုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါကိရိယာသည်ဤ operating system ကိုကထောက်ခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ပျက်စီးသွားသော inoperable သို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်သည်။
ဗီဒီယို Watch: Windows 10 April 2019 Update 19H1: Top5Changes! (အောက်တိုဘာလ 2019).